ဥရောပတိုက်တွင်ခရီးသွားလာ | အားလပ်ရက် | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
ဥရောပတိုက်တွင်ခရီးသွားလာ | အားလပ်ရက်များ
ဥရောပတိုက်မှာတော့အများဆုံးကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးတစ်ဦးအတော်လေးသေးငယ်တဲ့ဧရိယာထဲမှာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူနေထိုင်ကြသည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး Lederhosen နှင့် Dirndl အတွက်ဘာသာစကား Bavarian Oktoberfest အတွက်အောင်ပွဲခံနေစဉ်, ကပူမွန်းတည့်နေရောင်ထဲမှာစပိန်အဘို့ဖြစ်၏ "Siesta" ပါစေ။ အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအများဆုံးကွဲပြားခြားနားသောဒေသများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစနစ်ဥရောပ၌တွေ့ဆုံရန်လည်းတိုင်းဓာတ်ပုံဆရာများ၏စိတ်နှလုံးမရှိအဆိုတင်သွင်း။
ဤတွင်, များစွာသောခရီးသွားများအတွက်ပင်ကမ္ဘာတွင်ကောင်းစွာကမ္ဘာပေါ်မှာအခြားမည်သည့်တိုက်ကြီးပေါ်သူတို့ကိုတွေ့ပါဖို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တံခါးပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးပူဇော်ဖို့ရှိကြောင်း, သို့သော်, မေ့လျော့။
တစ်ဦးစိတ်အေးလက်အေးလေထုထဲတွင် Fantastic ရှုခင်းကမ်းလှမ်းရန်ယမ်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, မိမိတို့ hectic နေ့စဉ်အသက်တာကိုမှလွတ်မြောက်ရန်ကြွင်းသောအရာနှင့်အပန်းဖြေ၏ search အတွက်ခရီးသွားများအတွက်, ဥရောပမြောက်အမေရိက၌တရားဖြစ်ကြသည်။
ယမ်၏များစွာသောရေကန်များတရောင်ပြန်ဟပ်သောရိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် Panaromabild တစ်နေဝင်ချိန်အတွက်တစ်ဆတ်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖွစျစေ, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရိုက်ချက်များဆွီဒင်, နော်ဝေနဲ့ဖင်လန်အတွက်အာမခံချက်နေကြသည်။
ဒါပေမယ့်ပင်နွေရာသီအတွက်အဘယ်သူကိုမြောက်ကိုရီးယားပျော့ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်သလိုဥရောပတောင်ပိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သူ။ စပိန်, အီတလီနှင့်ပေါ်တူဂီကမ်းလှမ်းရန်နေရောင်နှင့်ကမ်းခြေသာရှိသည်မဟုတ်, သူတို့ကလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့တစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းရှိသည်။ ဝေးခရီးသွားဧည့်ကမ်းခြေနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးခရီးသွားများအနေဖြင့်ဖွင့် All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အားလပ်ရက်တဦးဆုံးရှုံးကြောင်းအသစ်တခုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်ထံမှကုန်းတွင်းပိုင်းတိုင်းပြည်သိမှရနိုငျသညျ။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအချို့လူတန်းစားပေါင်းစုံနှင့်လေ့လာရေးခရီးအတူနီဇ်အတွက်သေးငယ်တဲ့ငှားရမ်းထားသောတိုက်ခန်းကော? grandiose ပုံရိပ်တွေအဘို့, မြောက်မြားစွာအခွင့်အလမ်းများကိုမဆိုအမှုကမ်းလှမ်းချက်ကိုမည်။
သင်တန်း၏, အဓိကဥရောပမြို့ကြီးများပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိသည်။ ပဲရစ်စ်နှင့်လန်ဒန်ကျွန်တော်တို့ကိုဥရောပတိုက်သားမှအတော်လေးနီးစပ်သည်နှင့်သေးလူအနည်းငယ်ကသာမြို့များကိုမြင်ကြပြီ။ အမေရိကန်တွေသို့မဟုတ်အာရှသားတစ်ဦးစျေးကြီး Intercontinental လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုယူဖို့လိုအပ်နေချိန်မှာကိုမြို့ကြီးများမှခရီးကုန်ကျမယ့်နာရီအနည်းငယ်နှင့်ပင်လျော့နည်းပိုက်ဆံကဆိုသည်။
ဒါ့အပြင်အဆိုပါပဲရစ် Eiffel မျှော်စင်, လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ Big Ben ကနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရောမ Colosseum ကဲ့သို့သောအခြားဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ဂန္ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းပတ္တူလူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်အတွက်သဘာဝကျကျသင့်လျော်၏ရုပ်ပုံများကိုယူပါ။
ပင်စာရင်းရွေးချယ်မှုများအမှန်တကယ်ဥရောပတိုက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နောက်တဖန်အဘယျသို့အရာကသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သူကိုတကယ့်အိုက်စလန်, လစ်သူသို့မဟုတ်အက်စ်တိုးနီးယားသည်မည်မျှသိသနည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်သင့်ကိုနောက်အားလပ်ရက်ပေါ်မှာထွက်ရှာတင်းကျပ်စွာဓာတ်ပုံများ၌သူ၏အမှတ်တရများစောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သငျသညျခရီးစဉ်အပေါ်အကြံပေးချက်များရှိပါသလား မှာကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်.
Mallorca | ဥရောပတိုက်တွင်ခရီးသွားလာ
ဆွစ်ဇာလန် Canton | ဥရောပပြည်နယ်များ
အလံဥရောပ Non-အီးယူ | အလံ
ဥရောပမြေပုံ | ဥရောပသမဂ္ဂ
ခွေးနှင့်အတူခရီးထွက် | အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအားလပ်ရက်
နွေရာသီအားလပ်ရက် | အားလပ်ရက်ခရီးသွား
တောင်ဆိတ် | အားလပ်ရက်ခရီးသွား
| ဖော်ရွေအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် အားလပ်ရက်ခရီးသွား
တောင်ပေါ်မှာအားလပ်ရက် | အားလပ်ရက်ခရီးသွား
ကလေးတွေနဲ့အတူအားလပ်ရက် | အားလပ်ရက် & ခရီးသွား
ပင်လယ်ကမ်းခြေ | အားလပ်ရက်ခရီးသွား
ကာရစ်ဘီယံ | ခရီးသွားအားလပ်ရက်
destination ဂျာမဏီ | အားလပ်ရက်ခရီးသွား
စခန်း | အားလပ်ရက်
မိသားစုနှင့်အတူစက်ဘီးစီး | အားလပ်ရက်များ
1970 ကတည်းကခွင့်ပြုခဲ့ - အမျိုးသမီးများရဲ့ဘောလုံး
အမြဲတမ်း Zoff ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်စာ၏
, တီထွင်ဖန်တီး Paint, အလုပ်အကိုင်
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အီစတာဆင်နွှဲသလဲ? | အားလပ်ရက်
အီစတာ - အစဉ်အမြဲဖွင့်သွားသောအလှဆုံးရုပ်ရှင်!
ရနံ့အားဖြင့်ကပိုအာဏာကို - တစ်ဦးစွမ်းအင်ကန်အဖြစ်အနံ့!
ကလေးတွေနဲ့အတူ Play - ဘုတ်ဂိမ်းများကိုဘယ်လိုအရေးကြီးသောရှိပါသလဲ